झापाका पालिकालाई रु. सात अर्ब १८ करोड सङ्घीय बजेट - Jagaran Post
झापाका पालिकालाई रु. सात अर्ब १८ करोड सङ्घीय बजेट
जागरणपोस्ट १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:२४
काठमाडौं : झापाका १५ पालिकालाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि रु. सात अर्ब १८ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आठ नगरपालिकाका लागि रु.चार अर्ब ५९ करोड २९ लाख र सात गाउँपालिकाका लागि रु. दुई अर्ब ५९ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । नगरपालिकामध्ये सबभन्दा बढी मेचीनगर नगरपालिकालाई रु.७६ करोड ५२ लाख बजेट छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकालाई रु ४७ करोड ७१ लाख, कन्काईलाई रु. ५८ करोड १८ लाख, गौरादहलाई रु. ४८ करोड ५१ लाख, दमकलाई रु. ७० करोड १७ लाख, बिर्तामोडलाई रु. ७० करोड १७ लाख, भद्रपुरलाई रु. ५० करोड छ लाख र शिवसताक्षी नगरपालिकालाई रु. ५७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कमल गाउँपालिकालाई रु. ४८ करोड ३३ लाख छुट्टिएको छ । गौरीगञ्जलाई रु. ३४ करोड ८६ लाख, कचनकबललाई रु. ३८ करोड ८७ लाख, झापालाई रु. ३४ करोड ८४ लाख, बाह्रदशीलाई रु. ३४ करोड १८ लाख, बुद्धशान्तिलाई रु. ३५ करोड ७६ लाख र हल्दिवारी गाउँपालिकालाई रु. ३२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्रीले दिए गणतन्त्र दिवसको